Blackjack 🥇 Ngena kwaye uzonwabele kwiBlackjack-online.app
Blackjack ngumdlalo odlalwa ngamakhadi kwiindawo zokungcakaza kwaye unokudlalwa nge-1 ukuya kwi-8 kumgangatho wamakhadi angama-52, apho injongo kukuba nenqaku elingaphezulu komchasi, kodwa ngaphandle kokuya ngaphezulu kwe-21 (ukuba ulahlekile). Umthengisi unokubetha ukuya kuthi ga kumakhadi ama-5 okanye ukuya kuthi ga kwi-17.
I-Blackjack: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo? 🙂
Ukudlala Blackjack online simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
1 nyathelo. Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwiwebhusayithi yomdlalo Isiphelo sendlela.
2 nyathelo. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ungaqala ukudlala.
Inyathelo le-4. Sondela ngokukhawuleza kangangoko unakho ukuya kuma-21.
I-Blackjack yenye yeyona midlalo yamakhadi idumileyo kwihlabathi. Umdlalo ngu elula, enomdla kwaye nabani na angayidlala. I-Blackjack inokudlalwa ngamanani e-1 ukuya kwi-8, ngamakhadi angama-52 nganye. Ukongeza, kukho ukhetho lokudlala i-blackjack kwi-intanethi.
Injongo yomdlalo ilula: phumelela awona manqaku aphezulu, ngaphandle kokudlula ngamanqaku angama-21. Ukufezekisa le njongo, umdlali ekuqaleni ufumana amakhadi amabini, kodwa unokucela ngaphezulu ngexesha lomdlalo.
Amanqaku aphezulu anokubizwa ngokuba yiBlackjack, yiyo loo nto umdlalo uneli gama limnandi.
IBlackjack, njengoko sisazi, iguqukile kwimidlalo eyahlukeneyo yenkulungwane ye-XNUMX eyayidlalwa eYurophu. Uninzi lwale midlalo lwalunento enye efanayo: injongo yayikukufikelela kwi-21.
Isalathiso sokuqala sale midlalo senziwa kwi Ngo-1601 kwaye ukho emsebenzini kaMiguel de Cervantes, eRinconete y Cortadillo. Le noveli ibalisa ngobomi kunye nosizi lweeSvillian rogues zeGolden Age, ezinesakhono sokudlala umdlalo obizwa ngokuba yi "Ventiuno".
Inguqulelo yesiFrentshi Umdlalo 21 wahluke kancinci njengoko umthengisi enokuphinda kabini ukubheja kunye nabadlali ababhejayo emva komjikelo ngamnye.
Emva koko Inguqulelo yase-Itali, enegama elisixhenxe nesiqingatha, uyavuma ukuba umdlalo uza kudlalwa ngamakhadi obuso kunye nenombolo 7, 8 kunye no-9. Umdlalo wahluka kuhlobo lwesiTaliyane kuba, njengoko igama lisitsho, injongo yayiza kufikelela kumanqaku asixhenxe anesiqingatha. Ngokucacileyo, ukuba abadlali bawela amanqaku asixhenxe anesiqingatha, bayaphulukana.
A IMelika yeza emva koQhushululu lwaseFrance, kwaye ekuqaleni yayingeyonto ithandwayo kwiindawo zokungcakaza. Ukutsala abadlali kulo mdlalo, abanini banikezela ngeebhonasi ezahlukeneyo. Olona khetho ludumileyo lubandakanya inkqubo yokubhatala eyi-10 ukuya kweyoku-1, yesandla esine-ace yemhlakulo kunye neblackjack. Eso sandla sabizwa ngokuba yiBlackjack, sinika umdlalo igama laso.
I-Blackjack ngumdlalo oneempawu ezininzi ngaphakathi kweekhasino ngokwazo. Apha sibonisa ezona ndlela zisetyenziswayo:
Umahluko ofana kakhulu nowentsusa, udlalwa ngesiqhelo ngawo I-6 ukuya kwi-8 yeekhadi ezingama-48
Nangona kunjalo, apha Kuyenzeka ukuba uliphindaphinde naliphi na inani lamakhadi, njengoko kunokwenzeka ukubetha elinye ikhadi emva kokususa ii-aces.
NgeSpanish 21, iBlackjack yomdlali ihlala ibetha umthengisi.
I-Blackjack yezandla ezininzi idlalwa ngendlela efanayo neBlackjack yesiqhelo kwaye ihlala ivela kwiikhasino ezikwi-Intanethi njengoko ivumela umdlali ukuya kuthi ga kwizandla ezi-5 ezahlukeneyo ngexesha lomdlalo omnye.
Lo mahluko udlalwa ngeekhonkco ezi-5 ngaxeshanye.
Le nguqulo idlalwa kunye Amakhadi angama-52 kwaye unokuhlala ucela ukuba usonge umdlalo wakho kwi-9 okanye kwi-Ace. Nangona kunjalo, kule nguqulo ukuba umthengisi uneBlackjack, uphulukana nokubheja kwakhe konke.
Ukutshintsha kweBlackjack kubonelela ngeendlela ezithile ezinokuthi zihlelwe njengokukopela kumdlalo wekhadi oqhelekileyo.
Nangona kunjalo, lo mahluko yenziwa nge-6 ukuya kwi-8 decks, abadlali bahlala benezandla ezimbini ezahlukeneyo, amakhadi ajongiwe ajongiwe kwaye abadlali banokutshintshisa amakhadi ezandla.
Umda weLas Vegas
I-Vegas Strip yenye ukwahluka Blackjack kwaye idlalwe 4 iikhonkco 52 amakhadi. Apha umthengisi unyanzelekile ukuba ayeke ukuba nje isixa samakhadi akhe si-17.
Kwakhona, umdlali unokususa amakhadi amabini okuqala kwaye aphinde asebenzise izandla zakhe.
Ngoku siyazi ukuba yintoni i-blackjack kunye nemibono yayo esisiseko, kodwa ngaphambi kokuba udlale i-blackjack kwindawo esekwe emhlabeni okanye ekhasino kwi-Intanethi, kuya kufuneka ufunde kwaye uyiqonde kakuhle Blackjack imigaqo. Oku kuyakuvumela ukuba uzive ukhululeke ngakumbi ngexesha lakho lokuqala lokudlala kunye nomdlalo oza kutyhileka ngokukhawuleza kubo bonke abadlali etafileni yakho.
I-BlackJack ngumdlalo weqhinga, odlalwa kwitafile edibeneyo apho abadlali abaninzi banokudlala khona, kodwa nganye ixhomekeke kwisicwangciso sayo kwaye idlala ngokukodwa ngokuchasene noMthengisi.
Injongo yomdlali ngamnye kukwenza i-21 okanye ukufumana isandla sakhe kufutshane nama-21. Umdlali okanye umthengisi wenza iBlackJack xa amakhadi abo amabini okuqala eyi-Ace ne-10 (ikhadi le-Ace + 10, okanye ikhadi le-Ace plus).
Qalisa ukudlala 🖤
IBlackJack Idlalwa ngokubanzi ngeekhonkco ezi-6 zamakhadi ngaxeshanye ezishukuxwe phakathi komdlalo ngamnye.
Kulo Umjikelo wokuqala Amakhadi ajongiwe kubadlali ajongiwe, ngaphandle kwekhadi lokuqala lomthengisi elijongiswe phantsi.
Xa ikhadi lokudlala lesibini lijongiwe, onke amakhadi ajongiwe ajongane kwaye lixabiso lekhadi lomthengisi eliza kuchaphazela zonke izigqibo eziza kwenziwa ngabadlali malunga nomdlalo.
Ixabiso lamakhadi omthengisi kufuneka lihlale lihleli ngaphezulu kwe-17Ngamanye amagama, ukuba amakhadi amabini okuqala omthengisi anexabiso elingaphantsi kwe-17, kufuneka athabathe amanye amakhadi ade afumane ubuncinci be-17 kwaye ubuninzi be-21.
Ukuba umthengisi wenza ngaphezulu kwama-21, uyajonga, kwaye bonke abadlali bayaphumelela. Kwimeko apho umthengisi ebeka ixabiso phakathi kwe-17 kunye ne-21, abadlali abanexabiso eliphezulu baphumelela, babopha abadlali ngexabiso elifanayo kunye nabadlali abanexabiso elingaphantsi kunokuba umthengisi ephulukene nokubheja kwabo.
I-BlakJack ihlawula 2 ukuya ku-1, kodwa ukuba umdlali wenza iBlackJack bayaphumelela u-3 ukuya ku-2. Ukuba uMthengisi weBlackJacks, uphumelela izandla zonke etafileni, nditsho nezo zixabisekileyo zingama-21. Xa umdlali kunye noMthengisi weBlackJack, kuthathwa njengotayi kwaye akukho ntlawulo.
Uya kuthi ngokubanzi ufumane ulwazi kwitafile nganye ye-blackjack ebonisa ubuncinci kunye nemilinganiselo yokubheja etafileni. Ukuba umda wetheyibhile ubonakalisa i-2- € 100, oku kuthetha ukuba eyona nto ibalulekileyo yokubheja iyi- € 2 kunye nokubheja okuphezulu yi- € 100.
Ixabiso lekhadi leBlackjack
Ikhadi ngalinye elinenani ukusuka ku-2 ukuya ku-10 lixabise ubuso (lilingana nenombolo yekhadi).
IiJacks, ookumkanikazi kunye nookumkani (amanani) baxabisa amanqaku ali-10
I-Ace ifanele inqaku eli-1 okanye amanqaku ali-11, ekukhetheni komdlali kuxhomekeke kwisandla sakhe kunye nexabiso elithandekayo kuye. Xa udlala i-BlackJack kwi-intanethi, isoftware ithatha ixabiso le-Ace elona liluncedo kumdlali.
Ngaphandle kokwahluka kwalo mdlalo, iintlobo zeentshukumo ziyafana kuzo zonke.
Kukho Iindidi ezi-5 ezahlukeneyo zentshukumo.
Yima (misa) Njengoko igama libonisa, umdlali wanelisekile ngesandla sakhe kwaye akafuni kufumana amanye amakhadi.
Ukubetha: kwenzeka xa umdlali efuna ukufumana elinye ikhadi.
Kabini: Ukuba umdlali uziva ukuba ufuna ikhadi elinye lokongeza (elinye), unokucela ukuphinda kabini ukubheja kwakhe aze afumane elinye ikhadi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu khetho lunokunikezelwa kuphela kumakhadi amabini okuqala owafumanayo.
Yahlula: Ukuba amakhadi amabini okuqala afunyenwe ngumdlali anexabiso elifanayo, anokukhetha ukwahlulahlula izandla zibe zimbini ezahlukileyo. Kule meko, ikhadi ngalinye liya kuba likhadi lokuqala lesandla esitsha. Ngapha koko, kuyimfuneko ukubeka ukubheja okusha (elilinganayo ngexabiso kwelokuqala) kwesi sandla sitsha.
Ncama: Kukho ezinye iikhasino ezivumela umdlali ukuba asonge emva kokufumana amakhadi amabini okuqala. Nangona kunjalo, kule meko uhlala ulahlekelwa yi-50% yemali obuyibheja ngayo ekuqaleni.